Uluhlu lwethu -I-Etagtron, Inc.
I-Etagtron ngumboneleli wezisombululo ozibophelele ekuncedeni abathengisi baphumelele.
Inika uluhlu olwandisiweyo lokuchonga kwiRF kwaye ihlala ingenakho ukuphazamiseka kwi-elektroniki yangaphandle.AM ihlala ibonwa kwiindawo ezincinci zokuthenga iimpahla, iivenkile ezinkulu zesebe, iivenkile ze-DIY, iivenkile zombane, kunye nabathengisi abaxuba amayeza apho iimveliso zineentsimbi ukupakishwa kwazo.
I-RF ilunge ngokugqibeleleyo kubathengisi abanomthamo omkhulu weemveliso ezihlanganisiweyo ngenxa yokuncamathela, iithegi ezicaba ezenza iRF inkqubo yokukhetha iivenkile ezinkulu, iivenkile zezaphulelo, oosokhemesti kunye neevenkile zevidiyo. Iinkqubo ze-EAS kwiRFID zithetha ukuba ukusetyenziswa kwayo kutshanje kuye kwanda kwiivenkile zeempahla.
Itekhnoloji yeRFID isebenzisa ukuqokelelwa kwedatha kwaye kunciphisa kakhulu imizamo yabantu kunye nephutha.
I-RFID ixhasa ukufundwa kweethegi ezininzi zeRFID ngaphandle komgaqo wokubona okanye kwinto-nganye-yento efunwayo, enika ukwanda kokusebenza kakuhle.
Zonke iithegi zeRFID ngaphakathi kuluhlu zinokufunyanwa kwangoko kwaye zifaniswe nolwazi kwiziko ledatha yakho.
Iiasethi zinokubhekiswa ngokunqamlezayo ngokuchasene neendawo ezinikezelweyo kwaye zirekhodwe njengangoku, zilahlekile, okanye zifuduswe.
I-RFID inokudityaniswa nokuskena okusebenzayo kunye nokufunda okungagungqiyo kwisisombululo sokulandela ngokuzenzekelayo.
Iintlobo ngeentlobo zabathengisi-kubandakanya uninzi lweevenkile eziphezulu zesebe, iivenkile ezinkulu, kunye neevenkile zeziyobisi-sele besebenzisa i-ESL, izibonelelo ezinokubakho ngamaXabiso eDynamic Centralized, ngaphakathi-eSitolo Ubushushu-Imephu, uLawulo lweeMveliso eziZenzekelayo.
Jonga Phambili uku...